In ka badan 160 Lamaane oo Degnaa Tuulo yar oo isku furay si ay u helaan Magdhaw !! | Codka Nabada| Hoyga Horseedka Nabada
In ka badan 160 Lamaane oo Degnaa Tuulo yar oo isku furay si ay u helaan Magdhaw !!
Mar 3, 2017 - jawaab
Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa qoray warbixin la xariirta in tuulo yar oo kutaala dalkaasi ay ka dhaceen in ka badan 160-Furiin, kadib markii ay soo baxeen in magdhaw la siinayo lamaanayaasha kala tagaya.
Lamaanayaal tiradooda ay ka badan tahay 160-Lamaane oo kunoolaa tuulo ku taalla bariga Shiinaha ayaa go’anasaday in ay kala tagaan si ay dowlada uga helaan magdhaw isugu jira lacago iyo waliba guryo ay ku noolaadaan.
Dowlada Shiinaha ayaa u garatay Tuulada Jiangbei meel ku wanaagsan farsamada hormarinta casriga ah, waxa ayna dowlada go’aansatay in tuuladaasi ay ka rarto dadkii degnaa ayna deegaan kale ka siiso guryo .
Sababta keentay in lamaanayaal badan kala tagaan ayaa lagu sheegay in ay tahay marka ay dalbadaan lamaanayaal wada jooga magdhaw in la siinayo in kaliya la siinayo hal guri iyo lacag dhan $19,000 oo dollar, halka lamanayaasha kala taga la siinayo midkiiba guri iyo lacag dhan $19,000 oo dollar.
Lamaanayaasha kala tagay ayaa qaarkood da’dooda waxa ay ka weyn tahay 80-sano halka kuwa kalana ay yihiin kuwa jira da’ dhaxaad, waxa ayna lamaanayaasha qaarkood qorsheenayaan in ay isku laabtaan marka ay helaan magdhawga.
Wargeyska Nanjing Morning Post ayaa ku waramay marka qoysaska is qaba ay doontaan Magdhaw la siinayo hal guri oo keli ah, balse, qoysaska markii ay aqriyeen qaabka lacagta iyo guryaha loo helayo ogaadeen in haddii ay isku furaan maxkamadda horteeda ay helidoonaan guri labaad iyo lacag.
Waxaa mashruucan furiinka sababay sidoo kale ka faa’iiday Shirkad arrimaha sharciga ka shqeyso taa oo qoysaska ka caawineysa inay kala tagaan ,waxayna shirkada ka qaadeysaa $2,000 oo dollar qoyskasta oo is furaya, sida uu qoray wargeyska China Daily.
Sida ay ku waramayaan Warbaahinta Shiinaha qoysaska ku kala tagaya helitaanka lacagta iyo magdhwga ayaa qorsheenaya in mudo kadib dib u midoobaan marka u helaan guryaha iyo lacagta la siinayo.
Dowlada Shiinaha ayaa magdhaw siisa dadka degan dhulka ay dowlada usoo baahato, waxa ayna arintan oo kale horey uga dhacday gobolka Nanjing ee Shiinaha oo dad badan isku fureen helitaanka Magdhaw owgeed.